🥇 ▷ Xiaomi waxay soo saari doontaa nooc qaas ah oo Mi 9T (Redmi K20) ✅
Xiaomi waxay soo saari doontaa nooc qaas ah oo Mi 9T (Redmi K20)
Tan iyo markii la bilaabay, Xiaomi Redmi K20 (Mi 9T) waxay heshay dib u eegisyo naxdin leh. Waxa ka yimaadaa ma aha oo keliya kuwa wax baadha, laakiin sidoo kale adeegsadayaasha iibsada qalabkooda.
Taasi waxay tidhi, sirta guusha ee telefoonkan casriga ah ee suuqa ayaa ku dhex dhici kara cutub laga bilaabo shaashad wanaagsan (ma jiraan wax xad ah oo aan xad lahayn), oo ay la socdaan kamaradaha qaarkood oo aan niyad jabin iyo laga yaabee kuwa ugu muhiimsan Super Qiimo!
Si aad ugu raaxaysato dhammaan dareenka taleefankaaga, Xiaomi waxay go’aansatay inay soo saarto teaser cusub, iyadoo shaaca ka qaaday inay soo saari doonto daabacaad gaar ah oo Redmi K20 ah!
Waxa xiiso leh, sida aad ku arki karto muuqaalka, shirkadda waxay ku dhawaaqday taariikhda la sii daayay ee Ogosto 16 iyagoo ku dhawaaqaya ereyga “K”. …
Xiaomi ugu dambeyntii waxay heshay qoryaha qoryaha, taas oo siin doonta koob suuq dhaqaale? Miyay mideyn doontaa dhammaan awoodaha Mi 9T (Redmi K20) oo waxay gelineysaa qalab aad iyo aad u fiican?
Waxaa laga yaabaa in. Ka dib oo dhan, shirkadda ayaa hadda bilaabay wada shaqeyn ay la leedahay “HALKAN KA MID AH”, oo ah shirkad laga leeyahay dalka Singapore. Iyada oo diirada la saarayo isboortiga laxiriira kubadaha fudud iyo fanka kale ee dagaalka.
Taasina waa… Si aad u sameyso garaacitaan, waa inaad ku sharaxdaa xoogga! Xaaladdan oo kale, adkeysiga qalabka.
Ka sokow dhejinta, ma jiro macluumaad dheeri ah oo ku saabsan nuqulka cusub ee Mi 9T la xaqiijiyay.
Xusuusnow, si kastaba ha noqotee, in noocyada K20 iyo K20 Pro kaliya la yimaadaan 6 ama 8GB oo RAM ah. Sidaa daraadeed, waa wax caadi ah in wararka xanta ah qaarkood ay muujinayaan in daabacaadan casriga ah ay jiri doonto 12 GB oo RAM ah.
Dhacdo ahaan, dhammaadka May, Redmi wuxuu soo saaray nooca K20 Pro oo leh 12 GB oo RAM ah, oo ay shahaado ku siisay TENAA. Si kale haddii loo dhigo, midowga u dhexeeya shirkadahan wuxuu noqon karaa fursadda saxda ah ee suuqgeynta.
Marka la soo gaabiyo, guushaas weyn. taleefannada casriga ah ee ay heleen, waa wax caadi ah in goor dhow ama goor dambeba la sameeyo qaab cusub. Kaliya maaha oo kaliya qalab fiican, laakiin sidoo kale taabashada qaar naqshadaha ah, laga yaabee midab. Waxaan rajeyneynaa in qiimayaashu hooseeyaan!
Ka sokow taasi, maxaad ka qabtaa arrintan? Fikraddaada ku soo gudbi faallooyinka hoose.